UNWTO enweghị nkwanye ùgwù megide Bahrain bụ mmebi nke Ọnọdụ Omume JIU
Location: Mbido » Ịdee » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » UNWTO enweghị nkwanye ùgwù megide Bahrain bụ mmebi nke Ọnọdụ Omume JIU
Nri na mmanya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere ọrụ dị mkpa mgbe niile. Mana imebi iwu doro anya site na Ngalaba Nnyocha nke United Nations na nri oriri ntuli aka UNWTO bụ ihe ihere site na ụkpụrụ andy. Mba ọ bụla na-aga nri abalị abalị Monday ga-abụ ikpe mara na izu izu a.
Ọ bụrụ na otu n'ime mba 35 UNWTO Executive Council Member kwere ka ndị nnọchi anya ha ma ọ bụ onye nnọchi anya ha gaa nri abalị abalị Monday a na Madrid taa, ọ ga-egosi enweghị nkwanye ùgwù megide Alaeze nke Bahrain na mba Arab.
34 nke 35 Mba nke 113 Executive Council for the World Tourism Organisation (UNWTO) aghaghi imeghachi obi ma gbachi nkiti, ikekwe na-akpa nkata na Republic of Georgia na UNWTO na-ekwe ka emebi iwu nke Ngalaba Nyocha nke United Nations.
Na 2009 na Nnyocha Nyochat nke United Nations na Geneva wepụtara Nhọrọ na Ọnọdụ nke Ọrụ nke Ndị Isi Ala na United Nations System of Organisations.
Pectionlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Njikọ Aka (JIU) nyere iwu 13 mba niile so na UN kwesịrị ịgbaso ma kpọọ ya aro 13.
Omume na-adịghị mma
Paragraf nke 7 kwuru:
Ndị omebe iwu / gọọmentị nke ndị otu United Nations system kwesịrị ịkatọ ma gbochie omume na-adịghị mma dịka nkwa, ihu ọma, akwụkwọ ịkpọ oku, onyinye, wdg, nke ndị ga-azọ ọkwa onye isi ma ọ bụ gọọmentị na-akwado ha nyere.
nhoputa ndi ochichi / nhoputa ndi ochichi, na nloghachi maka uzo di nma nke oma
eTurboNews kọrọ banyere mgbalị nke UNWTO Secretary Zurab ka s iji nweta uru karie onye ya na ya bu Shaikha Mai Al Khalifa site na usoro ndi na adighi nma.
Obi abụọ adịghị ya, Zurab Pololikashvili, odeakwụkwọ ukwu UNWTO na-emebi iwu JIU nke obodo ya kwadoro ịkwanyere ùgwù. Gọọmenti Georgia na-eziga onye ozi ala ọzọ ya ka ọ bụrụ nri abalị dị mkpa dị ka akụkụ nke ndị isi oche ndị isi na-ezukọ n'abalị tupu ntuli aka maka odeakwụkwọ ukwu UNWTO na-esote bụ mmebi doro anya nke omume rụrụ arụ. A na-agbakwunye nri abalị ahụ na mmemme gọọmentị naanị ụbọchị abụọ tupu nzukọ kansụl na ngwụcha izu, na-enyeghị nhọrọ maka Bahrain ịjụ ma ọ bụ tinye ya na mmemme.
Nrụgide ndọrọ ndọrọ ọchịchị Georgia na-etinye na mba ka ha votu maka onye ga-akwado ha, ya mere onye ozi ala ọzọ nke na-akwado nri abalị a agaghị ahapụ mmeri bụ nke enweghị ike ịkọwapụta.
Kedu ihe bụ Nnyocha Ọpectionụ nke United Nations?
Inslọ Ọrụ Nyocha Na-ahụ Maka Njikọ (JIU) bụ naanị ụlọ ọrụ na-ahụ maka mpụga nke onwe nke usoro United Nations nyere iwu ka a duzie nyocha, nyocha na nyocha nyocha niile.
Iwu ya bu ileba anya n'okwu banyere imebi iwu na ime ihe dika onye na acho mgbanwe nyefee usoro United Nations. JIU na-arụ ọrụ iji nweta njikwa na njikwa nchịkwa yana ịkwalite nhazi ka ukwuu n'etiti ụlọ ọrụ UN yana ndị ọzọ na-ahụ maka nlekọta na mpụga. N'ime afọ 50 gara aga, arara ngalaba ahụ nye na-enyere ndị omebe iwu nke ọtụtụ òtù United Nations aka ịgbado ibu ọrụ gọọmentị ha. JIU na-enye nkwado maka ọrụ nlekọta nke ụlọ ọrụ ndị a gbasara ọrụ mmadụ, ego na ihe ndị ọzọ. Na akụkọ ya na ndetu ya, ngalaba ahụ na-achọpụta usoro kacha mma, na-atụpụta akara aka ma na-eme ka ịkekọrịta ozi na nzukọ niile nke UN usoro nke nabatara Iwu ya.
Otu a na-aru oru maka ndi omebe iwu na ndi ode akwukwo nke ndi ulo oru ndi ozo na ndi otu mba ndi ozo, n'ime usoro United Nations, ndi nabatara Iwu ya. A na-akpọkarị ihe ndị a dị ka òtù ndị na-esonyere JIU. JIU nwere ngụkọta nke òtù iri abụọ na asatọ na-esonye dịka nke 28 nke na-arụ ọrụ dị oke mkpa na otu otu Unit si arụ ọrụ.
Otu a na-aru oru maka ndi omebe iwu na ndi ode akwukwo nke ndi ulo oru ndi ozo na ndi otu mba ndi ozo, n'ime usoro United Nations, ndi nabatara Iwu ya. A na-akpọkarị ihe ndị a dị ka òtù ndị na-esonyere JIU (PO). JIU nwere ngụkọta nke òtù iri abụọ na asatọ na-esonye bụ ndị na-arụ ọrụ dị oke mkpa na otu otu Unit si arụ ọrụ.
Iji kwalite njikọta n'etiti nzukọ nke usoro United Nations;
Pịa ebe a iji gụọ akwukwo, usoro na usoro nile site na JIU
Bahrain Geneva Government Madrid Organization Tourism United Nations World Tourism Organisation
Fraport Traffic Figures 2020: Nọmba Ndị njem Nọ na Fall Mere Akụkọ Akụkọ Ala Site na Covid-19 Ọrịa
78 nwụrụ ma na-arịgo na West Sulawesi, Indonesia
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Pride na-achọ ụlọ 100 site na 2030
United Airlines na Singapore ụgbọ elu na-agbasawanye ...
Nnwale ọbara ọhụrụ nwere ike buru amụma na ọ ga-enwe ọganihu na...
Uto Ahịa mmiri Citrus, Ndekọ ọnụ ọgụgụ, Site na...